Lehilahy Mpandraharahana Manina Ny Tsiron-tsakafo ao Etiopia—Ka Nanomboka Namboly Izany Tany Aminy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Oktobra 2016 8:48 GMT
Menkir Tamrath mampiseho vera roa misy fangaron-tsakay Etiopiana, Berbere sy Mitmita, avy amin'ny zava-maniry namboleny tao amin'ny tanimboliny ao Sunol, California. Sary: Meradith Hoddinott
Ity tatitra avy amin'i Meradith Hoddinott ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 30 Septambra 2016. Navoaka teto indray izany noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Eny amin'ny sisin'ny toeram-pamboleny, mandehandeha manerana ny sakay amboleny i Menkir Tamrat ary maka ireo ravin-kazo maitso antitra mba hanaovana sakay mena mamirapiratra.
“Toa tahaka ny manana sakay efa masaka, menamena, vonona hongotana isika,” hoy izy sady mampifampikasoka ny tanany.
Mandritra ny herinandro vitsivitsy manaraka, hijinja ireo sakay milahatra lavabe i Tamrat. Ary hanamaina azy ireo, hitoto azy ireo sy hametraka azy ireo ao anaty fangaron-tsakay ilaina ho an'ny nahandro Etiopiana. Manisy fangaro mitokana am-polony ao anatin'izay fangaro izany i Tamrat ary mifantoka amin'ny fandanjalanjana ny hasiaka sy ny loko rehefa manamboàatra ny tsirony.
Tsy mpamboly hatry ny ela akory i Tamrat. Lehibe tany ambanivohitr'i Etiopia tamin'ny taona 1960 izy. Tamin'ny fiandohan'ny taona 1980, tonga tao amin'ny faritry ny helodranon'i San Francisco any California izy, nahazo diplaoma MBA ary nanomboka niasa teo amin'ny sehatry ny fitantanana teknolojia avo-lenta. Tsy mba lavitry ny fony mihitsy ny sakafo avy any an-tanindrazany, saingy raha niezaka nanangana izany indray tamin'ny fangaron-tsakafo ao an-toerana ao California izy dia nisy ny zavatra tsy ampy.
Sakay Mena Mimita nitsiry tao amin'ny tanimbolin'i Menkir Tamrath. Hamaininy izany ary hototoiny ho an'ny fangaron-tsakay Etiopiana. Sary: Meradith Hoddinott
“Satria tsy afaka namorona sakay vovony avy amin'ny sakay eny an-talantalana aho.” hoy i Tamrat manazava. “Tena sarotra sy tsy mba misy mihitsy izany, ahoana no ahafantaranao hoe iza amin'ireto no mifanakaiky kokoa aminy?”
Ka niverina tany Etiopia i Tamrat ary nitondra masomboly ilainy hananganana zaridaina. Nofenoiny anana sy legioma ary sakay ny tokotaniny, ary nahita izy fa tena miavaka tanteraka ireo tsiro vaovao ireo.
“Ity ravin-kazo ity dia antsoina hoe “koseret”, hoy i Tamrat, mihazona tahon'anana maina. “Tsy mahita izany na aiza na aiza ianao. Tsy ampiasaina amin'ny nahandro any an-kafa mihitsy izany. Ary manana ny tsirony tsy mahazavatra izy. “
Nandritra ny taona maro, tetikasa noho ny fitiavana azy fotsiny ny zaridainan'i Tamrat. Saingy raha nampihena ny isan'ny mpiasa ny orinasan'ny teknolojia niasany tamin'ny taona 2009, nanararaotra izany i Tamrat mba hambolena ireto tsiron-katsafo Etiopiana ireto amin'ny sehatra midadasika kokoa. Nifandray tamin'ny toeram-pambolena eo an-toerana izy. Tamin'ity fahavaratra ity, nahazo hazon-tsakay 5000 novolena tao tanin'i California izy.
Raha vao nanana famatsiana sakay tsy tapaka i Tamrat, niroboka tao anaty boky, lahatsoratra sy fomba nahandro izy mba hikaroka momba ny fangaron-tsakay tonga lafatra. Saingy raha nanomboka nanafangaro ireo tsiron-tsakafo izy, nahatsapa fa misy fangaro miafina iray lehibe tsy ampy: ny fampiasan’ ineny!
“Tahaka izao ny nahandro Etiopiana, ‘ity sy ity an'ny Neny fantatra amin'ny tahaka ity sy tahaka ity,'” hoy i Tamrat tamim-pitsikiana. “Ary mety manana zavatra tsiambaratelo kely ampiany amin'izany izy ka tsy ho azonao mihitsy ny zavatra mitovy avy amin'ny fianakaviana manao sakafo mitovy.”
Menkir Tamrath nanomboka namboly sakay Etiopiana tamin'ny sehatra lehibe kokoa taorian'ny fiasany tao amin'ny orinasan'ny teknolojia tao Bay Area. Sary: Meradith Hoddinott
Hitadiavana fanampiana, nitodika tany amin ny naman'ny reniny nonina tao Oakland izy. Nanaraka ny rafozambaviny manodidina ny lakozia ihany koa izy miaraka amin'ny kahie rehefa nitsidika an'i Etiopia ity rafozany ity.
Tonga tamin'ny fangaron-tsakay mendrika ny any an-trano ihany izy.
” Nitondra santionany kely any amin'ny hotely ao Ethiopia mihitsy aho, “hoy i Tamrat.”Ho fampiderana sy hitenenana, “Ahoana raha mba manandrana ity ianao ry namana? ‘ Ary tsy nino izany ilay vehivavy fa nitondra izany avy any Amerika aho ary lehilahy no nikarakara azy! “
Menkir Tamrath maka ireo sakay ao amin'ny tanimboliny ho atao fangaron-tsakay. Nilaza izy fa foiny izy mbola kely tao Etiopia, tsy mba niditra tao an-dakozia mihitsy ny rainy. Sary: Meradith Hoddinott
Mivarotra ireo sakainy any amin'ny toeram-pisakafoanana ao Bay Area amin'ny alalan ‘ny orinasany, Timeless Harvest, i Tamrat. Saingy amin'ity vanim-potoana ity, mizara ny fotoanany amin'i California sy Etiopia izy, izay ao anatin'ny tetikasany vaovao.
Nanomboka ny toeram-pamboleny izy raha niverina nody mba hamboly vokatra tandrefana tahaka ny Swiss chard sy ny Tuscan Kale (legioma tena sarotra hita ao Etiopia). Foiben'ireo fikambanana ara-politika iraisampirenena marobe ny renivohitra, Addis-Abeba. Ary manantena hitrandraka ny firoboroboan'ny tsenan'ny toeram-pisakafoanana Tandrefana izay nirongatra nandritra ny folo taona lasa i Tamrat .
Na dia hita fa toa voasariky ny tanindrazany aza i Tamrat, mino tanteraka izy fa samy mpikambana ao amin'ireo firenena roa ireo.
“Tsara vintana ihany aho milaza fa manana firenena roa,” hoy izy. “Ary tsy voatery misafidy iray aho. Nisy ny fahafahana samihafa nomen'ireo toerana roa ireo. Mino aho fa tokony ho maro koa ireo olona manana firenena roa samy hafa. Mihoatra ny iray izany e! “
Ity tantara ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny KALW.